गण्डकीमा कति पुगे कोरोना संक्रमित ? कास्कीमा सबैभन्दा बढी – Gandaki Voice
Home/गण्डकी/गण्डकीमा कति पुगे कोरोना संक्रमित ? कास्कीमा सबैभन्दा बढी
गण्डकीमा कति पुगे कोरोना संक्रमित ? कास्कीमा सबैभन्दा बढी
पोखरा, ३ पुस ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । गण्डकीमा कोरोना संक्रमितको संख्या १३ हजार ६६५ जना पुगिसकेको छ ।
कूल ११ हजार ९१४ जना संक्रमित निको भएको गण्डकीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या अझै १५ सय ६४ जना छन् । यो तथ्यांक बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको हो ।
एक लाख १५ हजार ९२ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा १० हजार २३७ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म प्रदेशमा निको हुने दर ८६.६२ प्रतिशत, सक्रिय सङ्क्रमित दर १२.०२ प्रतिशत र मृत्यु हुने दर १.३७ प्रतिशत रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-१९ को नियन्त्रण र उपचारमा तोकिएका मुख्य अस्पतालमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कजेल, चरक मेमोरियल, फिस्टेल अस्पताल रहेका छन् ।
पोखरामा कति ?
पोखरामा कूल संक्रमितको संख्या ६१ सय ६७ जना पुगेको छ । जसमा पाँच हजार ४० जना निको भएकोमा एक हजार २१ जना अझै उपचारको क्रममा छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा मात्र १८७ जना पुगेको छ । जसमा पोखरामा मात्रै १०६ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै लमजुङमा पाँच, गोरखामा नौ, तनहुँमा २०, नवलपरासी पूर्वमा २० जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
यसैगरी स्याङ्जामा १३, पर्वतमा तीन, बाग्लुङमा आठ, म्याग्दीमा तीन जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । मनाङ र मुस्ताङमा भने सक्रिय संक्रमित रहेपछि हालसम्म कसैको पनि मृत्यु भएको छैन ।
सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला